Halyayga reer Brazil Rivaldo oo difaacay Neymar Jr kahor kulanka ay la ciyaari doonaan Belgium – Gool FM
Halyayga reer Brazil Rivaldo oo difaacay Neymar Jr kahor kulanka ay la ciyaari doonaan Belgium
Dajiye July 5, 2018
(Ruusia) 05 Luulyo 2018. Halyayga reer Brazil Rivaldo ayaa difaacay dabeecada xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Neymar Jr, taasoo muran xoogan dhalisay xiliyadii lasoo dhaafay kulamadii uu kasoo ciyaaray koovka aduunka 2018 ee haatan ka socda dalka Russia.
Rivaldo ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France wuxuu kaga hadlay dhaleeceenta uu helayo Neymar Jr.
“Neymar sameey waxa aad jeceshahay, una ciyaar sida aad jeceshahay inaad u ciyaarto, hala fiirinin waxa ay dhahayaan xulalka kale, sababtoo ah dalal badan ayaa isaha haray tartankan”.
“Hadii aad dooneyso inaad gambis sameyso, ama aad goolal dhaliso, ama aad soo bandhigto xirfadahaaga, ama aad la dhacdo mararka qaar qaladaad aad la kulantay ama aad dhulka u fariisato si aad waqtiga u disho, samey arintaas, sababtoo ah kuwa kaleba sidaas oo kale ayay sameeyaan”.
“Waxaad ku guuleysan doontaa koobka aduunka, waxaad calaamad u noqon doontaa Brazil, laakiin nasiib daro taasi waxay dhibeysaa shaqsiyaad qaar mana fahmi karo sababta”.
“Cristiano Ronaldo wuxuu dib u soo celin doonaa sharafta horyaalka dalkaTalyaaniga hadii uu ku biiro Juventus”...Christian Vieri
Blaise Matuidi oo amaanay Kylian Mbappé kahor kulanka Uruguay